सांगो सागर कोराल - iSearch
सुरु Superfoods निस्सन्देह, स्वस्थ सांगो समुद्री कोरल
समुद्री कोरल हाम्रो युरोपेली क्षेत्रमा एक सम्भावनाको उपाय हो जसले लामो लामो परम्पराको माध्यमबाट चमक दिन्छ, यति राम्रो तरिकाले ज्ञात छैन। तथापि, यो जीवाश्मकृत पोलिपको प्रसिद्धि र प्रभावकारिता एक लामो लामो इतिहासमा देखिन्छ। संक्षेपमा, समुद्री कोरलले 5.000 वर्ष पहिले अतीत देख्न सक्दछ, जुन न केवल तपाईंलाई रोचक लगाइएको छ, तर धेरै दुख र पीडा पनि छुट्यो। जीवाश्मित पोलिप्सले ट्रेस खनिज र खनिजमा गतिविधि बढेको छ र यसैले मानव शरीरमा धेरै सकारात्मक प्रभावहरू सुरु गर्न सक्दछ। यसैले, थाइरोइड रोग कम गर्न सकिन्छ र हड्डी पुनरुत्थानको लागि उत्तरदायी ऊतक पनि सुधारिएको छ। यदि तपाईं भित्री औंलाहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, कोरलको खपतले उपाय प्रदान गर्न सक्छ, किनकि कस्मेटिक सन्दर्भमा, सबै-राउन्डरले यसको उद्देश्य पूरा गर्छ।
1 आवेदन र प्रभाव
2 समुद्र को कोरल deacidification को लागि प्रयोग गरिन सक्छ
3 समुद्री कोरल हृदय रोगहरूको विरुद्धमा मद्दत गर्दछ
4 समुद्री कोरल एक पक्षीय वा घाटा आहारको कारणले कमीहरू रोक्छ
5 उत्पत्ति र सांगो समुद्री कोरको उत्पादन
6 कटनी र उत्पादन
7 समुद्री कोरल को सामाग्री
8 मग्नेशियम कोरलमा
9 ट्रेस तत्वहरू र खनिजहरू
10 आवेदन र खुराक
11 समुद्र कोर को साइड इफेक्ट्स
12 समुद्री कोर मा अध्ययन
13 कोरल उत्पादनहरू खरिद गर्दै र भण्डारण गर्दै
14.0.0.0.1 Youtube मा उपयुक्त भिडियो प्ले गर्नुहोस्। कृपया गोपनीयता नीति नोट गर्नुहोस्।
पारंपरिक एशियाई औषधि मा, जीवाश्मकृत पोलीप को बारे मा 5.000 साल को लागि एक अभिन्न अंग हो। परम्परा पनि देशमा सबैभन्दा पुरानो फार्मेसीमा भूमध्य स्पेनमा थियो जुन घरको नाम थियो र धेरै र खुसीसाथ सम्बन्धित थियो। युरोपको भूमध्य देशमा पनि, एक कोरल को सकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावहरु लाई सजग छ र तिनीहरूलाई धेरै पटक प्रयोग गर्दछ।
निम्न खण्डमा, आवेदनको प्रासंगिक क्षेत्र र कोर को कार्य को मोड अब उल्लेख गरिएको छ र अधिक विस्तार मा व्याख्या गरिएको छ।
समुद्र को कोरल deacidification को लागि प्रयोग गरिन सक्छ
यो ज्ञात छ कि पश्चिमी देशहरुमा मानवता को 90,00% भन्दा बढी अधिक अम्लीकृत शरीर छ। यसको कारणले धेरै अचम्मको तनाव, अस्वस्थ आहार र खराब पर्यावरणीय प्रभावको साथ अस्वस्थ जीवन शैली समावेश गर्दछ। एकपटक मानव शरीर अम्लीकृत भएको बेला, अनुभवले देखाउँछ कि उमेरको प्रक्रिया धेरै चोटि बढी हुन्छ। पुरानो उमेरका चिन्हहरूसँग, स्वास्थ्य समस्याहरू र समस्याहरू पनि प्रभाव पार्छन्। यस सन्दर्भ मा, यो ध्यान दिनु पर्छ कि एक सानो चिसो पनि एसिड बेस संतुलन मा एक प्रभाव छ। यही कारणले संयुक्त रूपमा पूर्णतया संयुक्त हुन सक्छ। यो बिन्दुमा सन्तुलन सिर्जना गर्न, समुद्री कोरल प्रदान गर्दछ।
प्रभावकारी प्रकृति साo्गो मरीन कोरल, इष्टतम अनुपात2मा क्याल्शियम र म्याग्नेशियम: 1, उच्च खुराक, शाकाहारी र उच्च जैव उपलब्धता, हड्डी र एसिड आधार परिवारको लागि पौष्टिक पूरक, 180 कैप्सूल सूचक
एक वास्तविक पौराणिक चमत्कार: जापानका मूल सा Sang्गो समुद्री कोरलमा शरीरको पूर्ण अनुपात 2: 1 मा मुख्य पोषक क्याल्शियम र म्याग्नीशियमको अनुपम वितरण छ - कोरल ओकिनावा टापुको वरिपरि आउँदछ, 'शताब्दी टापु' "र लगभग 70 अधिक ट्रेस तत्वहरू समावेश गर्दछ।
प्रकृति को शक्ति: सांगो समुद्री कोरल आश्चर्यजनक रूपमा छिटो जैवउपलब्ध छ र यसको खनिजहरू उत्तम रूपमा अवशोषित हुन्छन् - यसको विशेष प्रकृतिलाई धन्यवाद, तरल पदार्थहरूको सम्पर्कमा आयोनिज हुन्छ, जसमा समाहित क्याल्सियम र म्याग्नीशियम यौगिकहरू सजिलै रगत र शरीरको कोषहरू क्याप्सूल लिइसकेपछि पहुँच गर्न सक्दछन्।
कडा डुओ: साo्गो कोरलमा स्वाभाविक रूपमा दुई "हड्डी पौष्टिक" क्याल्शियम र म्याग्नेशियम हुन्छ - क्याल्शियम, निश्चित रूपमा हड्डीहरूको लागि सबैभन्दा प्रसिद्ध पोषकहरू मध्ये एक हो, जस्तै म्याग्नेशियमले सामान्य हड्डीहरू कायम राख्न मद्दत गर्दछ र सामान्य दाँत कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
प्रत्येक शुल्क प्रयोगशाला परीक्षण: उत्पादनको प्रत्येक एकल ब्याच स्वतन्त्र जर्मन प्रयोगशाला द्वारा रेडियोधर्मी संक्रमणको लागि स्वेच्छाले परीक्षण गरिन्छ पूर्ण उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित गर्न।
ग्रेटिटुडबाट र प्रकृतिप्रतिको प्रेम: प्रभावकारी प्रकृतिले दिगो र वातावरणीय अनुकूल उत्पादनको सुनिश्चित गर्दछ, केवल बेवास्ता गरिएको कोरल मचान प्रयोग गरेर, जसले कोरल चट्टानलाई नष्ट गर्दैन वा कोरलहरू मार्दैन - साo्गो क्लाम क्याप्सुल पूर्ण रूपमा शाकाहारी छ, योजकमुक्त र जर्मनीमा उत्पादन गरिएको।
समुद्री कोरल हृदय रोगहरूको विरुद्धमा मद्दत गर्दछ
एक असंतुलित अम्ल-बेस ब्यालेन्सको अतिरिक्त, व्यक्तिगत पोषक तत्वहरूको कमजोरा लक्षण पनि स्वास्थ्य समस्याहरूको कारण हुन सक्छ। म्याग्नेशियम आपूर्तिको क्षेत्रमा कमजोरी लक्षण, उदाहरणका लागि, कारण चिन्ता, आक्रोश, घर्षण वा सिरदर्द पनि। कोरल कमजोरीहरू प्रयोग गरेर मात्र क्षतिपूर्ति गर्न सकिँदैन, तर पनि रोकियो। यो अवस्थाले हृदयको असुविधालाई रोक्न सक्छ र यसको पनि भडकाऊ प्रभाव हो।
समुद्री कोरल एक पक्षीय वा घाटा आहारको कारणले कमीहरू रोक्छ
विशेष गरी एक पक्षीय वा त्यस्ता व्यक्तिहरूले खानेकुरा, जस्तै वेगान्से जानबूझेर मासुको उत्पादनबाट बचाउँछन्, अभावबाट पीडित भए तापनि पनि यसलाई जान्न सकिन्छ। सुरुदेखि सम्भव सम्भावना कम गर्नका लागी समस्याहरूको सामना गर्न समुद्री समुद्रको सेवन पनि फायदेमंद हुन सक्छ।
उत्पत्ति र सांगो समुद्री कोरको उत्पादन
एक को उष्णकटिबंधीय या subtropical समुद्री वातावरण मा कोरल पाता छ। मूलतया, पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, त्यहाँ यी जीवाश्मकृत पोलिपासहरू छन् जुन यी क्षेत्रहरूमा एक प्रकारका उपनिवेशहरू छन्। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका समुद्री कोरहरू छन् जुन विभिन्न विशेषताहरू छन्। सांगो समुद्री कोरल पत्ता लगाइएको छ, उदाहरणका लागि, केवल ओकिन्वाको क्षेत्रमा, यो कोर धेरै शताब्दीका लागि चिनिन्छ र 8 मा पहिलो पटक पनि साबित भएको छ। शताब्दी युरोपेली देशहरूमा आयो। वर्षौंमा, तथापि, युरोपमा मानिसजाति महासागरको यस वृद्धिको बारेमा बिर्सियो र यही कारणले यो सुरुमा बिर्सिएको थियो। तथापि ओकिनावा क्षेत्रको रूपमा, अधिक से अधिक बुजुर्गले 100 प्रयोग गर्दछ। जब वैज्ञानिकहरू यो उमेर पुग्छन्, तिनीहरूले निर्णय गरे कि यो तथ्य थियो कि मान्छे त्यहाँ पिउन सकेनन्। यस विशेष कोरलको कारण, पानी धेरै महत्वपूर्ण ट्रेस तत्वहरू र पोषक तत्वहरूसँग बसाइयो। यसले मानिसहरूको वृद्ध उमेरमा इष्टतम पोषक तत्वको आपूर्तिको नेतृत्व गर्यो। खनिज भूजल को विभिन्न जीवहरुमा मानव जीव को समर्थन को लागि दिखाया गएको छ। यद्यपि, यो पनि सहमति छ कि पोषक तत्व-अमीर पानीको अलावा, विशेष गरी स्वस्थ आहारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। योगमा, कम हृदय रोगहरू छन्, कम क्यान्सर र अन्य कमजोरीका लक्षणहरू कम छन्।
कटनी र उत्पादन
कोरल को फसल पनि धेरै कोमल छ, ताकि वास्तविक कोरललाई क्षतिपूर्ति नगर्ने हो। केवल जीवाश्मकृत कोरल घटक वास्तविक कोरल राइफ बाट रिलीज गरिन्छ र त्यसपछि पाउडरमा प्रसोधित गरिन्छ।
यस बिन्दुमा, जापानी पर्यावरण प्राधिकारीले कटौती र अनुपालनको लागि विशेष ध्यान दिन्छन्।
यसको अतिरिक्त, 60 को 100 एम को मौजूदा गहराई देखि समुद्री कोरहरु लाई केवल कटौती हुन सक्छ। यहाँ तथ्य छ कि कुनै सूर्यलाइट छैन र यसकारण त्यहाँ कुनै जीवित कोरल छैन। यो जीवन प्रकाश विकासको लागि आवश्यक छ र त्यहाँ त्यहाँ कमी छैन। जब कटनी पूर्ण भयो, कोरल कंकालहरू सावधानीपूर्वक सफा गरिन्छ र त्यसपछि सूखे। त्यसपछि 200 डिग्रीमा भागहरू भाग गरिन्छ। यो हुन्छ, तर केवल धेरै छोटो हुन्छ, अवयवहरूलाई बाँध्न। अन्तिम चरण pulverization हो। त्यसपछि तपाईं मौन पाउडरको रूपमा वा बजारमा क्याप्सुलको रूपमा बहुमूल्य वस्तु भेट्नुहुनेछ र तपाईलाई सही छनौट गर्ने निर्णय गर्नुहोस्।
समुद्री कोरल को सामाग्री
समुद्री कोरल 70 ट्रेस तत्वहरू र खनिजहरूको तुलनामा धेरै बढी हुनुपर्छ। नतिजाको रूपमा, यस सूची लामो छ।
सबैभन्दा सान्दर्भिक समावेश छ:
यी व्यक्तिगत पदार्थहरू साँच्चै धेरै महत्त्वपूर्ण छन् र मानव शरीरको लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा उनीहरूले समर्थन र शरीरका आफ्नै प्रक्रियाहरूलाई बढावा गर्छन्। शरीर मा यिनी पदार्थों को पर्याप्त अस्तित्व को बिना, अलग कक्ष तंत्र संभव नहीं हुनेछ।
उदाहरणका लागि, सांगो सागर कोरलमा औसत संघीयता 20% क्याल्सियम र 10% म्याग्नेशियम हो। संयोग, व्यक्तिगत अध्ययनको अनुसार, यस वितरणको वितरण पनि वास्तवमा फायदेमंद छ। क्याल्सियम हड्डिहरु र दांतहरुको लागि राम्रो छ। सामान्यतया, गलत जानकारीको यस क्षेत्रमा, कैल्शियम मुख्यतया दूधमा भेटिन्छ, तर यो मामला होइन। तपाईं यसलाई कोरलमा पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको आफ्नै घर फिर्ता लिन वा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। Vegans भाग, विशेष गरी म्याग्नेशियम र एक अलग सेवन को लोहे को सामाग्री को कारण भाग को रूप मा अक्सर कमी को रूप मा। साथै, जो लोग लक्टोज असामान्यता छ, कोरल द्वारा दूध वा डेयरी उत्पादन को उपभोग नगरी आफ्नो कैल्शियम ब्यालेन्स को लागि महत्वपूर्ण विनियमित गर्न सक्षम हो। यस समूहको लागि, यो धेरै पदार्थ थप्न धेरै सान्दर्भिक छ, किनभने यो धेरै फरक चयापचय प्रक्रियाहरूमा संलग्न छ र हृदय ताललाई पनि विनियमित गर्दछ।
क्याल्सियमको अलावा, बेशक तपाई पनि म्याग्नेशियम फेला पार्नुहुनेछ। म्याग्नेशियमलाई मानव पोषक तत्व प्रणालीको एक अस्तित्व पनि मानिन्छ। यदि पर्याप्त हेरविचार निश्चित छैन भने, यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य समस्याहरू पनि उत्पन्न हुन्छन्। म्याग्नेशियम, आफैले शरीर द्वारा उत्पादन गर्न सक्दैन, तर धेरै चयापचय प्रक्रियाहरूको लागि सम्भव छैन। यदि पर्याप्त आपूर्ति छैन भने, त्यहाँ स्वास्थ्य समस्याहरू छन्। यसैले, यो जटिलताहरूको लागी, विशेष गरी मोटो कार्बोहाइड्रेट चयापचयमा हुन सक्छ, वा प्रोटीन विकृति गलत हुन सक्छ।
दुई घटक मैग्नीशियम र क्यालिसियम को संश्लेषण मानव शरीर मा कम हुनु हुँदैन। दुवै पदार्थ एकअर्कामा परस्पर निर्भर हुन्छन् र, मानव जीवमा अन्य पदार्थको उपस्थिति बिना तिनीहरूको पूर्ण प्रभाव नहुन सक्छ। कोरल दुवै सामग्रीको एक सही मिश्रण प्रदान गर्दछ। यहाँ तपाईंले चाँडै पोषक तत्वको सन्तुलन सन्तुलन गर्न एक प्रयास गरिएको परीक्षण र परीक्षणको रूपमा फेला पार्नुहुनेछ।
ट्रेस तत्वहरू र खनिजहरू
तथापि, जीवाश्मित पोलिप्सले शरीरको आवश्यक अन्य ट्रेस खनिज र खनिजहरू समावेश गर्दछ। यी पदार्थ सामान्यतया ionized रूप मा पाइन्छ। यसैले, तिनीहरू मानव चौंका झिल्लीहरू द्वारा अझ बढि अवशोषित हुन सक्छन् र पछि प्रशोधन गर्न सकिन्छ। फेरि, प्रभावहरू वर्णन गर्न धेरै जटिल छन्। यसलाई मुक्त कण बारी मा तल dreaded बुढ्यौली प्रक्रिया यसको पाठ्यक्रम धीमा जो, जारी छन् सुनिश्चित जो शरीर एक तथाकथित एंटीओक्सिडेंट प्रभाव, घुल किनभने तामा र सेलेनियम काम राम्रो मा यस सन्दर्भमा धेरै रोचक समावेश गर्यो।
कोरलका उपयोगकर्ताहरूले फिटर उपस्थिति र उच्च प्रेरणाबारे नियमित रूपमा बोल्छ। सबै मा, यो समुद्री कोरल को प्रभावकारी प्रभाव को लागि पनि बोल्छ।
प्रभावी प्रकृति सा Sang्गो मरीन कोरल, इष्टतम अनुपात2मा क्याल्सियम र म्याग्नेशियम: 1, उच्च खुराक, शाकाहारी र उच्च जैव उपलब्धता, हड्डी र एसिड-बेस परिवारको लागि पौष्टिक पूरक, 100 g पाउडर सूचक
प्राकृतिक स्रोत शरीर कोषहरु मा प्रवेश गर्न सक्छन्।
प्रकृतिका लागि क्षमा र प्रेम: प्रभावकारी प्रकृतिले टिकाऊ र वातावरणमैत्री उत्पादनको सुनिश्चित गर्दछ, केवल बेवास्ता गरिएको कोरल मचान प्रयोग गरेर, जसले कोरल चट्टानलाई नष्ट गर्दैन वा कोरलहरू मार्दैन - साo्गो समुद्री कोरल पाउडर पूर्ण रूपमा शाकाहारी छ, योजकबाट मुक्त छ र जर्मनीमा उत्पादित छ।
आवेदन र खुराक
विशेषज्ञहरू सल्लाह दिन्छन् कि कोरल कम्तिमा 12 हप्ताको लागि लिइन्छ। एक छोटो अवधिको चक्र चक्र वास्तविक पाठ्यक्रममा कुनै मात्र वा अपर्याप्त असर हुनेछ। मूलतः, एक भेदमा पनि यो बनाइएको छ कि चाहे उपभोक्तामा गम्भीर प्रतिकूल प्रभावहरू छन् वा केवल एक सहायक र निवारण कार्य कमजोरीको लक्षणहरूको विरोध गर्न अवस्थित छ। पहिलो, 12 हप्ता मानव शरीरमा खनिज भण्डारहरू भर्ना गर्न एक राम्रो आधार प्रदान गर्दछ। एक मौलिक लक्ष्य अभिमुखीकरण र समुद्री कोरल को लगातार सेवन तर यति सकेसम्म प्रभावकारी, सुरक्षित, तपाईंले संग dosing मुद्दाहरू मार्फत बोल्छ र तपाईं को लागि सबै भन्दा उपयुक्त राजस्व विधि निर्धारण गर्ने चिकित्सा व्यवसायी, परामर्श गर्नुपर्छ। साथै ध्यान दिनुहोस् कि कोरल पाउडरको वास्तविक स्वाद फरक फरक देखिन्छ। एक मरीजले स्वादलाई तटस्थ बनाउँछ, अर्को भन्दा सट्टा। यो व्यक्तिगत स्वादमा निर्भर गर्दछ। मूलतः, तथापि, जब डाइन्जिन सिफारिस गरिएको छ भने3ग्राम भन्दा बढि लिनको लागि। अधिक अवशोषित भएको सबै कुरा शरीरद्वारा प्रशोधन गर्न सक्दैन र पाचन तंत्रबाट उत्प्रेरित गर्न सक्दैन। मूलतः, तपाईं कोरल पनि पर्याप्त भिटामिन D3 र K3 हेरचाह मा, यो मानव शरीर मा पदार्थ को अधिग्रहण र प्रशोधनका लागि एक जरूरी छ रूपमा विचार गर्नुपर्छ।
समुद्र कोर को साइड इफेक्ट्स
कोरल को साइड इफेक्ट अनिवार्य रूप देखि अज्ञात हो, तर यदि तपाईं प्रति दिन सिफारिश गरिएको3ग्राम भन्दा अधिक खपत गर्नुहुन्छ भने, शरीरले मात्र यी पदार्थहरू प्रशोधन गर्न सक्दैन र उनीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा पाचन प्रणालीमार्फत उत्साहित गर्दछ। यसैले, यो यहाँ पूर्णतया प्राकृतिक पदार्थ को लागी ग्रहण गर्न सकिन्छ।
समुद्री कोर मा अध्ययन
विशेष गरी, सांगो समुद्री समुद्री कोरमा, त्यहाँ विभिन्न अध्ययनहरू छन् जुन मानव शरीरमा कोरलको प्रभावको अन्वेषण र प्रतिनिधित्व गर्दछ। यी ओकिनावा सदीवादी अध्ययन (1976-1994) समावेश गर्दछ। तथापि, यस सन्दर्भमा अन्य अध्ययनहरू भेट्टाउन सकिन्छ।
कोरल उत्पादनहरू खरिद गर्दै र भण्डारण गर्दै
तपाईं मूलतः2फारमहरूमा समुद्री कोरल किन्न सक्नुहुन्छ। एकै ओर, शुद्ध पाउडर फारममा, जुन अनाज वा अन्य तरल पदार्थ वा कैप्सूलको रूपमा लिन सकिन्छ। मूलतया तपाईंले कोरल अन्धा राख्नु पर्दछ र धेरै गर्मीलाई बेवास्ता गर्दैन। यसबाहेक, तपाईं पहिले नै औषधी पसलहरू, औषधिहरू वा इन्टरनेटमा रहेको क्याप्सुल र पाउडरको अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। बस सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं यो प्रक्रियामा व्यापारीलाई भरोसा गर्नुहुन्छ, तपाईं हर्बल उत्पादनको प्रभावकारिता पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
पीवोल्ड सा Sang्गो महत्वपूर्ण - साo्गो मरीन कोरल - 250g पाउडर क्याल्शियम र म्याग्नेशियम संकेतकको साथ
PIOWALD गुणवत्ता - ब्रान्ड उत्पादन: Piowald Sango Vital - 100% ओगाइनावाबाट सांगो समुद्री कोरल पाउडर। 20: 10 को शरीरको आफ्नै अनुपातमा क्याल्शियमको प्राकृतिक स्रोत (2%) र म्याग्नेशियम (1%)।
ओरिजिन - ओकिनावा टापु (जापान) धेरै हदसम्म साo्गो कोरल मिलेर बनेको छ। सबै तिर समुद्री समुद्री किनारमा ड्रिल गरिएको साo्गो कोरलका स्यान्डबारहरू छन्। यी तलछटहरूबाट, साo्गो समुद्री कोरल एक 300m गहराईबाट एक वातावरणीय सचेत, यांत्रिक प्रक्रियामा प्राप्त गरियो।
जर्मनीमा बनाउनुहोस् - हामी हाम्रा उत्पादनहरू घर भित्रै बोतलिंगमा हातले भरिन्छ। त्यसोभए हामीसँग छोटो यातायात मार्गहरू र घर मा सीधा क्वालिटी नियन्त्रण छ। कुनै अनुबन्ध निर्माताहरु!
प्रयोगशाला परीक्षण: प्रत्येक ब्याच विकिरण र डीई मा प्रदूषक को लागी परीक्षण गरीन्छ।
विज्ञापन बिना - ओकिनावाबाट शुद्ध सांगो समुद्री कोरल पाउडर।
समुद्री कोरल सिद्धान्तमा दुई रूपहरू उपलब्ध छन्। या त पुरा तरिकाले पाउडर वाला रूप मा या कैप्सूल को रूप मा। जहाँ तपाईले ठीक पाउनुभएको छ यो उपचार तपाईंसँग छ। पदार्थले तपाईंको शरीरको बायोव्वाव्युटि बढाउँछ, त्यसोभए तपाईं केहि पोषक तत्वहरूलाई पनि अझ राम्रो गर्न सकिन्छ। इन्जेस्ट एक स्वरूपथथ संग इलाज थेरेपी को भाग को रूप मा ले जान्छ, स्वयं को शुरुआती माप को भाग को रूप मा। केवल निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ कम्तिमा 12 हप्ताको लामो अवधिको लागि उपचार लिनुहुन्छ। अन्यथा, यो मानिन्छ कि पोषक तत्व को स्थिति मा सुधार हुन्छ।
हालको साताहरुमा, प्राकृतिक दबाइ मा समुद्री कोरल को महत्व आफैले फेरि महसूस गरेको छ। यो वास्तविक ज्ञान पहिले नै 8 पछि नै छ। मसीह पछि पनि सताब्दीमा वितरित। यो केवल फेरि देखि मोटाई मा गिर गयो र सुपरफूड र वर्तमान वैकल्पिक चिकित्सा विकास को समयमा प्रासंगिकता मा प्राप्त भयो।
यो अवस्थित रोगहरूको सन्दर्भमा वा व्यक्तिगत खनिज को रोकथाम र तत्वहरु को ट्रेस को उत्कृष्ट रूप मा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा सकारात्मक प्रभाव यो हो, पहिले नै उल्लेख गरिएको छ, कुनै अन्य सम्बन्धित साइड इफेक्टहरू जुन विचार गर्न आवश्यक छैन।
Youtube मा उपयुक्त भिडियो प्ले गर्नुहोस्। कृपया ध्यान दिनुहोस् गोपनीयता नीति.
अघिल्लो लेखनरिवल तेल
अर्को लेखकिन जैविक कफी किन्न लायक छ?